civil laghubitta bittiya sanstha ltd(civil laghubitta bittiya sanstha ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अधिकांश सूचकमा सिभिल लघुवित्तको उत्कृष्ट प्रदर्शन, नाफामा २७९.८५%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २७९.८५ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको नाफा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको...
काठमाण्डौ। सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले थप ७ वटा शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरेको छ। सिभिल बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिद्धिल लघुवित्तको न्यून उपस्थिति रहेका स्थानहरुलाई समेटी क्रमशः झापाको धाईजन, मोरङको भाथिगछ, सुनसरीको भीमपुर, सप्तरीको बलुवा, चितवनको रत्ननगर, सिन्धुपाल्चोकको पाटीभञ्ज्याङ र कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा...
ग्लोबल मनी विक–२०२१ : सिभिल लघुवित्तद्वारा वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी विक–२०२१’ उपलक्ष्यमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयलगायत २९ जिल्लामा अवस्थित ५५ वटा शाखा कार्यालयले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुने प्लेकार्ड,...
काठमाण्डौ । ‘समृद्धिका लागि सिभिल बैंक’ भन्ने नाराका अगाडि बढिरहेको सिभिल बैंक लिमिटेडले ग्लोबल मनी विक’ को उपलक्ष्यमा विविध वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै मनाउँदैछ । बैंकले भोलि चैत ९ गतेबाट सातै दिन प्रदेशको रोलक्रमका अनुसार विभिन्न जनचेतनामूलक विविध वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न लागेको हो।...
सिभिल लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि बिहीबार सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सिभिल लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ९६६ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि सिभिल लघुवित्तको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ थियो। अब...
आजसम्म कायम सेयरधनीले सिभिल लघुवित्तको लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बुधबार अन्तिम दिन रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि सिभिल लघुवित्तले भोलि फागुन २० गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज फागुन १९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र यो संस्था प्रस्ताव...
सिभिल लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो नवौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको हिजो बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आउँदो चैत ५ गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरस्थित वोगनभिल्ला इभेन्ट्समा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको कुल ३.६४२१...
काठमाण्डौ । सरकारले होटेल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचान स्थापित गर्न संकेतका रूपमा स्टार चिह्न निर्धारण गर्ने भएको छ। ग्राहकलाई दिइने सेवा, गुणस्तर, क्षमतालगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी संकेत चिह्न प्रदान गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। संकेत चिह्नलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न...
राष्ट्र बैंकद्वारा सिभिल लघुवित्तको लाभांश स्वीकृति, कति छ बोनस सेयर ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृति गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सिभिल लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको कुल ३.६८४२१ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेको हो। जसमा हाल कायम चुक्तापुँजी २३ करोड ३९ लाख ३३ हजार ७०० रुपैयाँको ३.५ प्रतिशतले हुन आउने ८१ लाख ८७ हजार...
सिभिल लघुवित्तको नाफा रु. २.७४ करोड, रिजर्भमा १७२.४२% को छलाङ
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाको नाफा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा १७२.४२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा संस्थाले...
गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतापछि सिभिल लघुवित्तको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सेचेन्ज (नेप्से) ले धितोपत्र दोस्रो बजारमा रोक्का गरेको सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर कारोबार सोमबारबाट फुकुवा गरेको छ। नेप्सेले एक सूचना जारी गर्दे सिभिल लघुवित्तको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको जानकारी गराएको हो। यसअघि कारोबार समयमा बजार प्रभावित पार्ने गरी सिभिल लघुवित्तले लाभांश...